Etu ị ga - esi bawanye ntụgharị ekwentị gị na - eduga gị | Martech Zone
Nke a bụ ụfọdụ ihe omume ụlọ akwụkwọ maka gị tupu ị gụọ.
Kedu ihe bụ nke gị pasent nke mgbanwe nke na-eme site na mkpanaka na desktọọpụ? Na nchịkọta Google, họrọ Mkparịta ụka> Mgbaru ọsọ> Mgbanwe ma hota okporo ụzọ mkpanaka maka ndị otu izizi gị na ndị na-abụghị Mobile Traffic maka nke abụọ gị:
Kedu ihe bụ nke gị pasent nke okporo ụzọ nke na-eme site na mkpanaka na desktọọpụ? Na nchịkọta Google, họrọ Ndị na-ege ntị> Isi ma hota okporo ụzọ mkpanaka maka ndị otu izizi gị na ndị na-abụghị Mobile Traffic maka nke abụọ gị:
Ihe atụ m na-enye n’elu bụ onye ahịa B2B, yabụ enwere nkọwa ụfọdụ gbasara ọdịiche dị n’etiti ha abụọ. Ekwenyesiri m ike na ndị na-eme mkpebi B2B nwere ike ịgbanwe onye ọrụ a site na desktọọpụ. Dispdịiche - ma ọ bụrụ na ọ bụla - na-adaberekarị na ndị ahịa gị. Mobile nwere ike ịdị na-adị n'azụ desktọọpụ, ọ bụ ezie na nyocha nchọgharị na ịzụta na-aghọwanye ebe nkịtị. Ọbụna ka, dị ka 2015 Google akụkọ, enwere ugbu a karịa ọchụchọ na-eme na ekwentị karịa na desktọọpụ… ya mere ohere dị.
Usoro iji bulie pipeline ahịa ire ere gị dị iche na otu ị si ebuli ọwa gị ndị ọzọ. Ahụmịhe ahịa ahịa mkpanaka ga-abụrịrị nke ọma na kensinammuo na usoro ọ bụla. O di nwute, otutu ulo oru enweghi uzo ahia ahia. Ọ dị mkpa maka azụmahịa gị ịghọta ihe na-eme ka ahịa mkpanaka bụrụ ihe pụrụ iche ka ị nwee ike ịmepụta atụmatụ na atụmatụ na-aga nke ọma.
Nwere ike ịchọrọ ịlele ogo ahụ ma rụọ ọrụ na saịtị gị iji hụ na ị nwere ike iwepụ nsogbu ọ bụla ma mechie ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ. Nke a ozi sitere na Salesforce na-akọwapụta ụzọ 6 ị ga - esi meziwanye ọnụọgụ ahịa ahịa ekwentị:
Ebe nrụọrụ gi aghaghi ibu enyi-enyi - imepụta gị kwesịrị ichebara nha ihuenyo dị iche iche, ọdịnaya gị kwesịrị ịdị mfe ọgụgụ, oku na omume gị na bọtịnụ kwesịrị ịdị mfe ịpị, ma ị ga-enwe bọtịnụ pịa-ka.
Gbaa mgbasa ozi ekwentị na Social Media - ndị na-eme mkpebi gị na ndị na-emetụta mkpebi nzụta nọ na ngwa mkpanaka mmekọrịta ekwentị kwa ụbọchị. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze site na mkpanaka na Twitter, Facebook, na LinkedIn nwere nnukwu ohere iche.
Meziwanye Oge Ibu Ibu Webpage - dabere na Usoro KISS, 47% nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya ka ibe weebụ buru ibu na sekọnd abụọ ma ọ bụ obere na 40% nke ndị mmadụ gbahapụrụ weebụsaịtị weghaara ihe karịrị sekọnd atọ ibu Otu nkwụsị nke abụọ na nzaghachi peeji nwere ike ime ka mbelata 7% na ntụgharị
A / B Nwalee ihu igwe ọdịda gị - nwalee nhazi gị, isi okwu gị, ọdịnaya gị, na oku ime ihe iji hụ ụdị aghụghọ na-ewepụta mgbanwe ntụgharị kachasị elu.
Mepụta Ibe Azụmaahịa Google Maka Ahịa Maka Obodo - ọtụtụ ndị ahịa na azụmaahịa na-eji maapụ iji chọọ ndị na-eweta ọrụ gburugburu ha. Jide n'aka na nke gi Google My Business peeji nke dị ọhụrụ ma ị na-eji nhọrọ niile dị na ya, gụnyere onyonyo.
Na-ebuli ụzọ ntụgharị gị - belata ọnụ ọgụgụ nke usoro iji gbanwee onye ọbịa na ndu, hụ na ụzọ ịzụta dị mfe ma doo anya. Ma n'ezie, jiri mgbasa ozi mgbasa ozi na nnukwu onyinye iji rata ndị ọbịa gị ịgbanwe.
Nke a bụ Infographic, Etu ị ga - esi meziwanye ire ahịa ekwentị:
Tags: ule uleụzọ ntụgharịntụgharị ntụgharịihe mgbaru ọsọgoogle azụmahịa motúesi eme ka ahia bawanyemobile mgbasa ozimobile ọnụego mgbanwemobile enyi na enyimobile na-edugamobile ahịa na-edugamkpanaka mkpanakamobile mgbasa oziule anwaleokporo ụzọmobile na desktọọpụmobile na desktọọpụabụghị mkpanaka okporo ụzọahịa na-edugamkpanaka mkpanaka